Homeसमाचारबिरगन्जमा संगै ६ कक्षामा पढ्ने व्यवसायीका दुई छोरा ह’राए, परिवार चिन्तित
January 10, 2021 admin समाचार 5519
बिरगन्जमा ट्युशन पढेर फर्के पछि ब्याडमिन्टन खेल्न निस्केका दुई बालक हरा’एका छन् । शनिबार बिहानदेखि पर्साको वीरगन्जबाट दुईजना बालकह’राए पछि परिवारका सदस्य चिन्तामा छन् । प्रहरीले पनि बालकहरुको खो’जी सुरु गरेको छ ।
बाल’कहरु दुवै जना वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ४ विर्ताका रहेको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ। वीरगञ्जका व्यवसायी जगरनाथ कलवारका छोरा शिवेश गुप्ता (तेजस) र वीरगञ्ज–४ विर्ता बस्ने दिपेश शर्माको छोरा प्रनेश शर्मा ह’राएका हुन । हराएका बालकहरु गौतम स्कुलमा कक्षा ६ मा अध्यनरत थिए ।
शनिबार बिहान होम ट्युसन पढेपछि साइकल लिएर निस्केका उनीहरु घर फ’र्किएका छैनन् । बालकहरु परिवारको सम्पर्कमा नआउँदा परिवार चिन्तित छन् । कलवारराष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष पनि हुन्। सिभिल प्रहरीसहितको सहकार्यमा खो’जी कार्य अगाडी बढाइएको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले बालकहरुको खोजीका लागि सीसीटिभी फुटेजको पनि अध्य’यन गरेको छ ।
अहिले सम्म एउटा सीसीटिभीमा उनीहरु देखिएको भएपनि ती बालकहरु फेला नपरेको सोही एरि’यामा रहेको वडा प्रहरी कार्यालय विर्ताका प्रहरी निरीक्षक राजेशराज पुरीले बताए। दबै बालकहरु स्थानीय गौतम मा।वि। को कक्षा ६ मा अध्य’यनरत छात्र रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
दुवै बालकहरु घरबाट बिहान करिब ११ बजे तिर बाहिर निस्केका थिए। अहिलेसम्म दुवै जना फे’ला परेका छैनन्। कहिँबाट कुनै जानकारी वा सूचनाहरु पनि केही आएको छैन। प्रहरीमा भने हिजो साँझ नै उजुरी दिएर दुवै बालकको खो’जी कार्य भइरहेको तेजसका बुबा जगरनाथ कलवारले बताए।
‘केही मागेर नल्याइदिएको पनि हैन, घरमा झ’ग’डा गरेको पनि थिएन,’ उनले भने, ‘घरबाट सँधै जस्तै निस्केको मान्छे फर्केर न’आएपछि साथीभाइ आफन्तकोमा खोजी गर्‍यौं । नभेटिएपछि प्रहरीको सहयोग लिएका छौं ।’
यातायात व्यवसायी कलवारको होटल व्यवसायमा स’मेत लगानी छ । त्यसैले बालकहरुको अ’पहर’ण भएको हुनसक्न आशंका कतिपयले गरेका छन् । तर बालकहरु अ’पहर’णमा परेका हुन वा कतै गएका हुन ? यकिन भइसकेको छैन । अहिलेसम्म कतैबाट फोन ‘नआएको कलवारले बताए । – इताजा खबरबाट
September 14, 2020 admin समाचार 11766
बाँदर रुखमा चढेको त हामीले देखेका नै छौँ । तर के तपाईले बाख्रा पनि बाँदर’झैँ रुखमा चढेको देख्नुभ’एको छ ? देख्ने त कुरै छो’डौँ सुुन्नु पनि भएको छैन होला । सामान्यतया हामीले पाले’का बाख्रा त्यसरी
March 9, 2021 admin समाचार 3616
May 5, 2021 admin समाचार 3319
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (212104)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (211803)